Cali Guudlaawe & Xubno kale oo loo diiwaangeliyay doorashada Hir-Shabelle +Sawirro - Awdinle Online
Cali Guudlaawe & Xubno kale oo loo diiwaangeliyay doorashada Hir-Shabelle +Sawirro
Magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ka socota diiwaangelinta musharixiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Hir-Shabeelle & kuxigeenkiisa.
Diiwaangelinta oo shalay bilaabatay ayaa waxaa la diiwaangeliyay ilaa Afar Musharax oo kala ah, Siihayaha xilka Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe & Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo u sharaxan Madaxweynaha Hir-Shabeelle.
Waxaa dhinaca kale Guddiga doorashooyinka Hir-Shabeelle ay diiwaangeliyeen laba musharax oo u taagan qabashada xilka Madaxweyne kxuigeenkia Hir-Shabeelle, kuwaas oo kala ah , Guddoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed & Maxamed Maxamuud Cabdulle (M dheere).
Maanta ayaa la soo geba-gabeeyay diiwaangelinta musharixiinta Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabelle iyo kuxigeenkiisa, waxaana Maalinta berito ah la dhageysan doonaa khudbadaha musharixiinta, halka Maalinta Arbacadaha aha ay daheyso doorashada Madaxweynaha Hir-Shabeelle & kuxigeenkiisa.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo la kulmay qaar kamid ah Dhalinyarada Soomaaliyeed
Next articleDowladda Soomaaliya oo Saraakiil Ciidan u dirtay Magaalada Kismaayo